१९ करोड झ्वाम प्रकरण : गायकको जग्गा सुरक्षित, दुई कर्मचारीको जग्गा धितोमा ! | katipath news
गायक योगेश्वर अमात्यको बारामा रहेको १२ बिगाहा जग्गा सुरक्षित रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जनाएको छ । सीआईबीका अनुसार नक्कली कागजात राखेर पैसा निकाल्ने कुमारी बैंकका दुई कर्मचारीको १९ करोड बराबर जग्गा धितोमा राखेर अमात्यको जग्गा सुरक्षित बनाइएकाे छ ।
बैंकले ठगी गर्ने कर्मचारी मुक्तिनाथ गौतम र एसकुमार महर्जनको जग्गाजमिन राखेर अमात्यको जग्गा सुरक्षित गरिसकेको बताइएको छ । १९ करोड ठगी धन्दा गर्ने कुमारी बैंक पर्सा शाखाका जुनियर असिस्टेन्ट सोनु ठाकुर, जग्गाका मूल्यांकनकर्ता राजेश्वर चौरसिया, गौतम र महर्जनलाई पक्राउ गरेर हाल अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
गायक अमात्यले आफ्नो कीर्ते गरिएको थाहा पाएपछि प्रहरीमा उजुरी दिएपछि सीआईबीले ठगी गर्नेहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । सीआइबीले १९ करोड लगानी कहाँ भयो ? भन्ने सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको बुझिएको छ ।
कोटेश्वरस्थित बेनियल ट्रेडिङ कम्पनीका सञ्चालक गौतम र महर्जनले बिरुवा भूमि वनकाली कम्पनीका नाममा नक्कली कागजात बनाएर काठमाडौंको न्युरोडस्थित कुमारी बैंकको शाखाबाट १९ करोड रुपैयाँ ऋण झिकेको पत्ता लागेको हो।
ऋण स्वीकृत गर्न नक्सालस्थित कुमारी बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको पाइएको छ। केन्द्रीय बैंकले अनुमति दिएपछि न्युरोडस्थित शाखाबाट रकम निकालिएको पाइएको सीआईबीले जनाएको छ। उक्त कीर्तेबारे विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।